ဟော့ကင်းမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
မွမ်းမံထားတဲ့ Ms. Marvel ၂၀၂၂ တွင် LEGO minifigure?
24 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 140 Views စာ0မှတ်ချက် 10759 Elastigirl ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်လိုက်စား, 76076 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဂျက်လိုက်စား, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, Ms Marvel, ဒေါ်။ Marvel, streaming များ, အဆိုပါ Marvels
Marvel စတူဒီယို Marvel show သည် ၂၀၂၂ တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပြီး LEGO ဇာတ်ကောင်၏ minifigure အသစ်ကိုဆိုလိုသည်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 141 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကလင် Barton, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, နောကျတှဲရထား, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 333 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, သေစားသေစေသောစည်းဝေးပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, အောင်နိုင်သူ Kang, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Thor, Thor: Ragnarok, Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား, Throg
ဤရွေ့ကား 2021 Marvel နှင့် Star Wars ပြပွဲများသည် LEGO အစုံများရနိုင်သည်
14 / 08 / 2021 14 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 295 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, Bob chapek, Boba fett, Disney, Disney+, Hawkeye, Lego, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, mandalorian, Marvel, Star Wars, Star Warsဖြေ, streaming များ, Boba Fett ၏စာအုပ်, အဆိုပါ Mandalorian
Disney မကြာသေးမီက၎င်းတို့နှစ် ဦး ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Star Wars နှင့် Marvel စီမံကိန်းတွေမနှောင့်နှေးသေးပါဘူး
14 / 08 / 2021 14 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 223 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76142 Avengers Speeder စက်ဘီးတိုက်ခိုက်မှု, AIM အေးဂျင့်ဆန့်ကျင် 76164 Iron Man Hulkbuster, 76196 Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်, 76196 Marvel Avengers Advent ပြက္ခဒိန်, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Avengers, Black က Panther, Black ကမုဆိုးမ, GAME, Hawkeye, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ, ချင့်ချိန်ခြင်း, ရင်ပြင် Enix, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
07 / 08 / 2021 07 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 355 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ပြသ, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ရုပ်သံပြပွဲ
နောက်ထပ် Lego ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည် Marvel Infinity Saga သည် ၂၀၂၂ တွင်ရောက်ရှိမည်
18 / 03 / 2021 18 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1292 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity Saga, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, Captain America: The First Avenger, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Nebula, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group, Valkyrie, စစ်ပွဲစက်
LEGO Avengers ၏ပထမလှိုင်းကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသေးပါ။ Infinity Saga သည်ယခုထိမရှိသေးသော်လည်းစကားလုံးပေါ်ထွက်လာနေပြီဖြစ်သည်။
လိမ့်မည် Marvel Must Haves သည် LEGO ကိုဖော်ပြသည် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား?
18 / 01 / 2021 18 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1083 Views စာ0မှတ်ချက် 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, Lego, Loki, Marvel, Marvel Haves ရှိရမည်, ဒေါ်။ Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Disneyအပတ်စဉ်အသစ် Marvel Must Haves စီးရီးသည်ကောလာဟလသတင်းများ LEGO ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးကြည့်နိုင်သည် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား
ဒီမှာအားလုံး Marvel မှလာမယ့်ပြပွဲနှင့်အထူး Disney+
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 761 Views စာ0မှတ်ချက် သံချပ်စစ်ပွဲများ, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Hawkeye, ငါ Groot ပါ, သံမဏိart, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Loki, Marvel, မွန်း Knight ဟာ, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျူးကျော်, သူမသည်-ရှိသွားပြီ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Marvel စတူဒီယိုများသည်စူပါဟီးရိုးပြပွဲအသစ် ၁၁ ခုကိုယူဆောင်လာသည် Disney+ ၏အုပ်ထိန်းသူများနှင့်အတူလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်ကျော်